Ugu Weyn Ee Roses
Isku-darka dhalashada ee fasallada iyo kooxaha
Mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee dunidan casriga ah waa "boqoradda ubaxa" - Rose. Xaqiiqooyinka qadiimiga ah waxay tilmaamayaan in xitaa qarnigii V ee qarnigii BC. e. sawirkeedii wuxuu bilaabay inuu ku sawiro alaabta guriga, farshaxanka. Qarniyo badan oo ah taranta, isdhaafinta, isgooska iyo xulashada dabiiciga ah, kooxo iyo noocyo badan oo shuban ah ayaa la sameeyey, kuwaas oo lagu soo daro sifooyin kala duwan.
Kareecadu waxay ku kacday khamri furan: macmacaan guri
Ma waxaad la yaabi doontaa cid kasta oo leh binkaal casaan ah ama ubaxyo, laakiin Rose oo leh dabool ama gabal gabal gaboobay waa wax cusub! Laba badeecadood ayaa laga sameeyaa tufaaxa cabitaanka: khamriga iyo macaanka. Kuwani waa cuntooyin qiimo leh oo qiimo leh, hodan ku ah vitamiin iyo asiidh dufan oo muhiim ah, iyo weliba walax kasta oo ka soo-baxsho ah waxay leeyihiin saameyn ka hortag ah oo dhiirrigeliya bogsashada xuubka xabka ee xubnaha gudaha.
Rose "Black Baccara": sharaxaadda iyo sifooyinka beerashada
Sidii la ogyahay, weli ma jirto wax madow ah oo adduunka ah. Midabada dhow ee burooyinkeeda waxay leeyihiin darajo "Black Baccara". Waxaa la naqshadeeyay sanadii 2004-kii oo uu sameeyay tarbuunka Faransiiska. Sida laga soo xigtay sharaxaad, Rose "Black Baccarat" si weyn uga duwan noocyada kale ee shaaha ah ee hybrid. Si taxaddar leh u darso kala duwanaanshahan ka hor intaadan soo dejin qofkan deggan beertaada.
Rose "Westerland": sharaxaad ku saabsan sifooyinka daryeelka, dhalmo
Rose "Westerland" (Westerland) - mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee ku-shubka iyo hindisada midab-kala-duwan. Tani maaha mid aan micne lahayn, sababtoo ah marka lagu daro muuqaalka cajiibka ah, dhirtaasi waxay sidoo kale leedahay iska caabin wanaagsan oo ah cudurada iyo dhaxanta. Ma aha ubax, laakiin mucjiso for wax beerta kasta! Sidaa darteed, haddii aad go'aansato inaad ku beerato sawirkaaga, xaqiiqdii maahan inaadan ku qaldamin doorashada.
Rose "Augusta Louise" waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu caansan uguna quruxda badan kuwaas oo hadda koray korka iyo jardiinooyinka. Jacayl, waxay ku guuleysatey ubax geedka jilicsan ee jilicsan ee casaan iyo fiiqan. Qoyaankan quruxda badan ee quruxda badan maanta waxaa loo isticmaalaa qurxinta iyo qurxinta fasaxyada, iyo sidoo kale hadiyad.
Ingiriisku wuxuu kacay "Xajka": korriin iyo daryeel
Ubax kasta waa ubaxa boqortooyada, ugu cadcad jinsi caddaalad ah. Laakiin muuqaalka beerta ayaa ah mid gaar ah: sharraxaadda xayawaanka tiirarka xayawaanka ee Ingriiska ah ayaa ku jira qaabkoodii hore ee cajiibka ah iyo muuqaal cajiib ah oo ubax ah. Maxay yihiin sifooyinka kale ee ubaxyada, sida ay u egyihiin iyo sida loo daryeelo gabadha beerta ee xun, akhriso maqaalkan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Roses 2020